Top 5 Loại Nhụy Hoa Nghệ Tây Tốt Nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 Loại Nhụy Hoa Nghệ Tây Tốt Nhất 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Loại Nhụy Hoa Nghệ Tây Tốt Nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
4.9/5 – (13 amavoti)
Ezikhathini zamuva, ukusetshenziswa i-safron pistil ibidala ukuhlanya emakethe ngenxa yokusebenzisa okulethayo. Ngakho liyini liqhakaze? Iluphi uhlobo olungcono kakhulu? Iyini ukusetshenziswa kwe-safron pistil?
Yonke imibuzo yethu izophendulwa ngendlela ephelele futhi enemininingwane khona esihlokweni esilandelayo.
Imikhiqizo Ethengiswa Kakhulu
1 Iyini i-pistil yesitshalo sesafron?
2 Ukusetshenziswa kwe-safron pistil
3 Ukuhlukaniswa kwemicu yesafron
3.1 Intambo yeSafron Negin
3.2 I-Saffron Sargol Yarn (ebuye yaziwe njenge-All-red)
3.3 I-Saffron Pushali Yarn (aka Poushali)
3.4 I-Saffron Bunch (eyaziwa nangokuthi i-Dateh)
3.5 I-Saffron Yarn Konj (eyaziwa nangokuthi i-Konge)
4 Izinhlobo ezi-5 eziphezulu ezithengisa i-safron ehamba phambili namuhla
4.1 Umkhiqizo we-Gohar Saffron stamens – othuthuke kakhulu emhlabeni
4.2 Imikhiqizo ye-Saffron ye-Bahraman Saffron – ikhwalithi enhle, intengo ethengekayo
4.3 Edman Saffron Brand
4.4 Imikhiqizo ye-Badiee Saffron
4.5 Saharkhiz Saffron Brand
5 Indlela yokukhetha i-pistil engcono kakhulu yesafron futhi uhlukanise Okwangempela – Amanga
5.1 Ngokusekelwe kusici sombala
5.2 Ngokusekelwe kuphunga
5.3 Ngokusekelwe kumumo
Iyini i-pistil yesitshalo sesafron?
Liqhakaze obeye aziwe njengo (Liqhakaze) isihlahla esinezinto eziningi zokwelapha. Ekupheleni kuka-Okthoba, emazweni aseMpumalanga Ephakathi, izimbali zesafron ziyaqhakaza. Abantu bavuna i-pistil bese bayomisa ngokwezinga elikhethekile lomswakama kanye nezinga lokushisa ukuze baqinisekise izici zokwelapha kanye nokunambitha komkhiqizo.
Ukuze uthole i-1g yomkhiqizo oqediwe, izimbali eziyi-1000 zesafroni ziyadingeka. Ngenqubo yokuvuna eyenziwa ngokuphelele ngesandla, iSafron ibhekwa njengenye yezimbali ezibiza kakhulu emhlabeni.
Ukusetshenziswa kwe-safron pistil
I-Saffron inokusetshenziswa okuningi, okuvelele futhi ikakhulukazi emkhakheni wobuhle nokunakekelwa kwezempilo.
Mayelana nokusetshenziswa kobuhle, i-safron iqukethe amavithamini namaminerali amaningi abalulekile, okusiza ukuthuthukisa ubuhle ngaphakathi. Uma isetshenziswa njalo, izokusiza ukuthi uthole isikhumba esithambile, esibushelelezi futhi esikhanyayo.
Mayelana nezinzuzo zezempilo, umkhiqizo ufakazelwe ukusiza ukwelapha izifo ezinjengokukhwehlela, amakhaza, ukopha kwesibeletho, ubuhlungu besisu, ukuqwasha, isifo sohudo, umphimbo obuhlungu, ukuqunjelwa…
Ukuhlukaniswa kwemicu yesafron
Kunemibuzo eminingi mayelana nenani lemikhiqizo yesafron emakethe njengamanje. Kungani kunomehluko onjalo wamanani?
Ngokufanayo nokunye ukudla, i-safron nayo ihlukaniswe yaba izinhlobo eziningi ngokusekelwe kwikhwalithi kanye nemvelaphi. Izinhlobo zemicu ye-pistil zihlukaniswa ngokwezinga ukusuka phezulu kuye phansi kuye ngobude benhlamba okuhlanganisa:
Intambo yeSafron Negin
Intambo ye-Saffron yenkampani ye-Negin yaziwa nangokuthi i-super Negin. Lena ifayibha ethuthuke kakhulu, njengoba isuse ama-stamens aphuzi kanye newolintshi kodwa isagcine ama-pistils eqinile anombala nephunga elimnandi. Isisindo sale ntambo silula kakhulu futhi singasetshenziswa isikhathi eside.
Xem Thêm Top 8 Hương nước hoa Burberry nữ mùi nào thơm nhất hiện nay | Muasalebang
I-Saffron Sargol Yarn (ebuye yaziwe njenge-All-red)
Uhlobo lwesibili ngemva kwe-(Negin) intambo ye-Sargol izacile futhi ifushane kune-Negin, ingaphansi kancane ngekhwalithi kune-Negin.
I-Saffron Pushali Yarn (aka Poushali)
I-Pushali uhlobo olungadingi ukususa i-stamen ephuzi nomzimba ongaphezulu obomvu ukuze kwandiswe isisindo somkhiqizo, futhi ikhwalithi nayo imbi kakhulu kunezinhlobo ezimbili ezingenhla. Izindleko zalolu hlobo ziphansi kakhulu uma kuqhathaniswa nentambo (Negin kanye neSargol).
I-Saffron Bunch (eyaziwa nangokuthi i-Dateh)
Intambo ye-Bunch yiyona yonke i-pistil yesitshalo sesafron, kuhlanganise nezingxenye ezibomvu neziphuzi, njengoba zazinjalo lapho zisanda kuvuna. I-stigma ivunwa iphelele futhi ihlanganiswe ibe yizinyanda ezincane, ngakho-ke kunzima ukuhlola ikhwalithi yenhlamba ngaphakathi.
I-Saffron Yarn Konj (eyaziwa nangokuthi i-Konge)
Lena ingxenye ephuzi yentambo ngemva kokusikwa kwentambo ye-Negin, Sargol. Izakhamzimba eziningi azisekho ku-Konjj fibers, zivame ukusetshenziselwa ukwenza itiye esikhundleni samanye amatiye avamile.
Emakethe yaseVietnam namuhla, imikhiqizo yesafron ingeniswa yimizila eminingi evela emazweni ahlukene. Okuzothi lapho kufanele kukhulunywe khona i-pistil yesafron yase-Iran ngoba kulapho umkhiqizo usatshalaliswa khona kakhulu emakethe.
Izinhlobo ezi-5 eziphezulu ezithengisa i-safron ehamba phambili namuhla
Umkhiqizo Liqhakaze yaziwa nangokuthi i-safron pistil Kwaziwa ngamakhulu ezinzuzo zezempilo. Nokho, akuyona yonke imikhiqizo liqhakaze efanayo.
Ngakho yiluphi uhlobo lwesafroni olungcono kakhulu? Sikumema ukuthi uthole impendulo ngezinhlobo ezi-5 eziphezulu ezithengisa i-saffron esizibuyekeze ngezansi.
Umkhiqizo we-Gohar Saffron stamens – othuthuke kakhulu emhlabeni
Oda ku-Shopee Order ku-Lazada Order e-Tiki(Okwangempela)
Okuhamba phambili ohlwini lwemikhiqizo yethu Ephezulu yesafroni ehamba phambili emhlabeni i-Gohar Saffron, uhlobo oluneminyaka engu-5 ubudala oluhlotshaniswa nesihloko somthengisi omkhulu we-Saffron emhlabeni. Lona futhi umkhiqizi wemigqa yeSaffron ehlonishwa kakhulu nesezingeni eliphezulu njengeSaffron Salam, Saffron Shyam…
I-Gohar Saffron yinkampani eyivelakancane e-Iran enepulazi layo, izimboni zaselabhorethri ezingahlangabezana nazo zonke izigaba zokukhiqizwa kwe-Saffron. Kusukela ekulimeni, ekuvuneni kuya ekuhlolweni nasekupakisheni, yonke into yenziwa ngomugqa ovaliwe. Ngenkathi ezinye izimboni e-Iran zivame ukuthenga izimbali zezitshalo zesafroni emapulazini ngamanye abantu abangaphandle bese beziletha emafektri ukuze zikhiqize futhi zipakishwe.
Ngenxa yamapulazi abo kanye nezimboni, imigqa yeSaffron yeGohar Saffron yonke ihlolwe ngokuqinile ukuthi ikhwalithi, inqubo yokukhula ibuye ilawulwe ngokucophelela, kuqinisekiswe imikhiqizo yekhwalithi engcono kakhulu.Ikhwalithi, intambo yeSafroni ehlanzekile futhi emsulwa. Yingakho imigqa yeSaffron yeSaffron efana neSaffron yeSaffron inokuqukethwe okuphezulu kwemisoco emakethe namuhla, enenkomba ye-Crocin = 270, izikhathi eziphindwe ka-2-4 kunemigqa ye-Saffron evamile.
Xem Thêm Ampli đèn là gì? Nguyên lý và cách thức hoạt động của Ampli đèn | Muasalebang
I-Gohar Saffron iyinkampani engavamile e-Iran efanelekile ukuthekelisa ezimakethe ezidinga kakhulu emhlabeni, lapho ikhwalithi iqinile kakhulu, njenge: Germany, France, UK, Sweden… Imikhiqizo ye-Gohar Saffron manje ikakhulukazi emazweni. njengeYurophu neMelika.
Imikhiqizo ye-Saffron ye-Bahraman Saffron – ikhwalithi enhle, intengo ethengekayo
I-Bahraman Saffron iphinde ibe ngumnikezeli we-Saffron odumile e-Iran. Njengoba iminyaka engu-45 yasungulwa inkampani kuze kube manje, i-Bahraman Saffron ibe ngomunye wabakhiqizi abakhulu be-Saffron e-Iran kanye nesifunda saseMpumalanga Ephakathi. I-Bahraman Saffron Company igxile kakhulu emkhakheni wokukhiqiza nokusabalalisa imigqa ye-Saffron enemiklamo ehlukene.
Uma imikhiqizo ye-Gohar Saffron ikhiqizwa ikakhulukazi izimakethe zaseYurophu nezaseMelika, imikhiqizo ye-Bahraman Saffron isetshenziswa kakhulu emazweni athile ase-Asia. Uma kuqhathaniswa nolayini weSaffron weGohar, iSaffron yeBahraman ingeyengxenye ethandwa kakhulu, intengo iphansi, okuqukethwe kwezakhi kuphansi, kodwa ikhwalithi isengaqinisekiswa.
Imigqa yomkhiqizo we-Bahraman Saffron iyatshalwa futhi ivunwe emapulazini angaphandle bese ilethwa enkampanini ukuze i-Bahraman iyikhethele ifekthri futhi ipakishwe, bese isakazwa emakethe.
Inzuzo yalokhu ukuthi izonciphisa izindleko zabasebenzi, ngakho intengo ye-Saffron ishibhile. Okubi wukuthi kunzima enkampanini ukuthi ilawule ukukhula kweSaffron ngoba zitshalwa ngaphandle. Kungakho i-Bahraman inikeza imikhiqizo yesikhumba ngokupakishwa okuhle, imiklamo ehlukahlukene, amanani athengekayo kanye nekhwalithi ezinzile.
Edman Saffron Brand
Oda eShopee Order eLazada
U-Edman Saffron uneminyaka engaphezu kwengu-50 ubudala. Umsunguli walolu phawu ungomunye wabasunguli benhlangano edume kakhulu yeSaffron e-Iran.
U-Edman Saffron ungenye yezinkampani ezingavamile ezinelabhorethri efanelekayo. Imigqa yomkhiqizo wakwa-Edman ikakhulukazi i-Green Saffron line, okusho ukuthi imikhiqizo lapha iqinisekisiwe ukuthi ngeke isebenzise amakhemikhali ngesikhathi sokutshala nokugcinwa.
Imikhiqizo ye-Badiee Saffron
I-Badiee Saffron ingumkhiqizo odumile e-Iran nakwamanye amazwe angomakhelwane aseMpumalanga Ephakathi. Inkampani ye-Badiee izinze edolobheni lase-Mashhad Iran, elasungulwa ngo-1987. Ngaphezu kweminyaka engama-35 yesipiliyoni, imigqa yemikhiqizo ye-Badiee ivame ukuthandwa ngabathengi ngenxa yamanani abo aphusile kanye nekhwalithi evamile.
Ulayini we-Badiee nawo usesigabeni esidumile futhi usetshenziswa kakhulu emazweni aseduze ne-Iran nakwamanye amazwe ase-Asia. Yonke imigqa yomkhiqizo we-Badiee ihlangabezana nezindinganiso zamazwe ngamazwe zokuhlola, ethobelana ngokuqinile nezidingo zohlelo lokuphatha ikhwalithi ISO 9001, ISO 22000…
Kodwa-ke, uma kuqhathaniswa neminye imigqa efana neSaffron Slam, Shyam.. Noma iSaffron bahraman, iBadiee Saffron ayikadumi kakhulu eVietnam. Ngakho-ke, okubi kakhulu ukuthi kunzima kubathengi ukuthenga imikhiqizo ye-Badiee.
Xem Thêm TOP 5 công cụ nén hình ảnh trực tuyến không cần hướng dẫn sử dụng | Muasalebang
Saharkhiz Saffron Brand
Lona umugqa womkhiqizo weSafron omdala kakhulu nohlonishwa kakhulu e-Iran. Kungashiwo ukuthi e-Iran, akekho ongazi ngeSaharkhiz Saffron. Ngenxa yokuthi uneminyaka engaphezu kwengama-80 ubudala, uSaharkhiz waziwa njengomdondoshiya odume kakhulu kubantu bezwe. Imigqa yemikhiqizo yenkampani yakwaSaharkhiz iqinisekisiwe ukuthi izohlangabezana nezindinganiso zamazwe ngamazwe. Ezinye zezinzuzo ukuthi i-Saharkhiz ihluke kakhulu emigqeni yayo yomkhiqizo, imiklamo, namanani.
Kodwa-ke, ngenxa yokuthi igxile kakhulu ekusabalaliseni imakethe yasekhaya ngezinga elikhulu, imikhiqizo ye-Saharkhiz ayivelele ngempela ngokwekhwalithi ukuze ihlangabezane nezindinganiso eziningi eziqinile kwamanye amazwe. , ikakhulukazi ezimakethe ezisheshayo njenge-Europe.
Imigqa yemikhiqizo ye-Saharkhiz yenzelwe ikakhulukazi izidingo zabantu base-Irani. Uma kuqhathaniswa nemigqa yesafron ephezulu, i-Saharkhiz ayivelele ngempela.
Indlela yokukhetha i-pistil engcono kakhulu yesafron futhi uhlukanise Okwangempela – Amanga
Njengamanje, ngenxa yesidingo esikhulu sabasebenzisi, ngezinhloso zenzuzo, kunemigqa eminingi yesafroni engelona iqiniso emakethe. Ukuqinisekisa izintshisekelo zabathengi, singathanda ukwabelana ngezindlela ezithile zokukusiza ukuthi uhlukanise ngokulandelayo:
Ngokusekelwe kusici sombala
Asiwise iSafroni emanzini. Uma kuwumgunyathi, amanzi avame ukufiphala abe nombala osawolintshi obomvu, asetshenziselwa ukwesaba okuthile kuphela. Ngokuqondene nomkhiqizo ungokoqobo, amanzi ayancipha abe ophuzi okhanyayo, kodwa uma wengeza kakhulu, uzophenduka i-orange, ngakho-ke udinga ukuhlukanisa ngokucophelela ngaphambi kokuthenga.
Beka i-Saffron emanzini afudumele, uma uthola ukuthi iphuma iphunga elinamandla le-honeydew, iwumkhiqizo omuhle. Imikhiqizo yomgunyathi ayinalo nhlobo iphunga elimnandi njengelangempela noma ayinalo nhlobo iphunga.
I-safron yangempela izoba nokuma kwe-pistil enkulu neyisicaba, kancane kancane ibheke phansi. Ngenxa yokuthi isisekelo se-pistil simunca umsoco esitshalweni, ikhanda le-pistil liyaphakama ukuze lithole ukukhanya kwelanga. Uma kuyi-Saffron mbumbulu, akunjalo, ngakho-ke imikhiqizo mbumbulu ivamise ukuba nemicu emifushane nephuke kuneyangempela. Isifinyezo samaphuzu ukuhlonza umkhiqizo wangempela we-Saffron
Ikhanda lesafroni limise okomqhele obomvu obumnyama, umzimba we-pistil mncane kunekhanda futhi unombala ophuzi-wolintshi.
I-Saffron Yangempela inokunambitheka okumnandi, ingxube ye-hay noju kodwa ayilokothi ibe nokunambitheka okumnandi ngoba Iqhakaze langempela linokunambitheka okubabayo.
Uma uyihlikihla phakathi kweminwe yakho emibili, izobaphuzi ngokusagolide.
Isitshalo se-Saffron sincibilika kancane emanzini ukuze sikhiphe umbala ophuzi wegolide, i-fiber ayikhubazekile, ayilahlekelwa umbala.
Izindinganiso ze-ISO 3632 zisiza ukugwema ukukhwabanisa kwebhizinisi nokuthola abahlinzeki besafron abahlonishwa kakhulu emakethe.
Inani. Uma i-Super Negin safron inenani elingu-300,000 VND / 1 igremu, kungenzeka ukuthi iwumkhiqizo womgunyathi.
Njengamanje, kunemikhiqizo eminingi yomgunyathi ye-saffron pistil emakethe, ngakho-ke udinga ukukhetha indawo ehloniphekile ongayithenga futhi wazi ukuthi ungayiqaphela kanjani ukuze uqinisekise izintshisekelo zakho. Ngokwabelana ngenhla, sithemba ukukusiza ukuthi uqonde kangcono umkhiqizo, ngaleyo ndlela sikusize ukuthi ube nolwazi oluthe xaxa ekukhetheni ukuthenga nokusebenzisa ngempumelelo.
Uma usadidekile ngokuthi yimuphi umkhiqizo ongawukhetha, khetha manje Isafironi engcono kakhulu kwe I-Gohar Saffron ibhekwa njengokusetshenziswa okungcono kakhulu ngenxa yamazinga ako okuphepha kanye nokuqukethwe kwezakhi ezinomsoco ezilinganiselwe kakhulu emhlabeni. Iqoqo eliqinile kanye nenqubo yokucubungula, iqinisekisa ubungako bomkhiqizo
(Kuvakashelwe izikhathi eziyi-1,685, ukuvakashelwa okungu-10 namuhla)
Tổng hợp 11 cách làm cá chiên xù ngon giòn rụm hấp dẫn ai cũng mê | Muasalebang
[Review] TOP 10 Serum Dưỡng Da Ẩm Cấp Nước Tốt Nhất | Muasalebang